Shacabka Itoobiya iyo Eritrea Oo lacag qaali ah ku Goosanaya Asmara Iyo Addis-ababa -
HomeWararkaShacabka Itoobiya iyo Eritrea Oo lacag qaali ah ku Goosanaya Asmara Iyo Addis-ababa
Shacabka Itoobiya iyo Eritrea Oo lacag qaali ah ku Goosanaya Asmara Iyo Addis-ababa
Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa ka heshiinaya colaadii u dhaxeysay mudo 20-sano ah, waxa ayna labada dowladood doonayaan in dib loo soo celiyo xiriirka labada dal u dhaxeeyay kahor dagaalkii dhax maray.
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa dhawaan booqasho taariikhi ah ku tagay magaalada Asmara ee Caasimada dalka Eritrea, waxa uuna halkaasi heshiisyo kula soo galay Madaxweynaha Eritrea.
Qodobada labada dal ku heshiiyeen waxaa kamid ah in dib loo soo celiyo duulimaadka tooska ah ee labada wadan , waxaana la filayaa in duulimaadka tooska ah uu dhawaan bilowdo.
Shirkadaha Diyaaradaha labada Wadan ayaa si caadi ah ugu kala duuli doona magaalooyinka Asmara iyo Adis Ababa, waxa ayna shacabka labada wadan fursan u heli doonaan in si toos ah labada wadan ugu kala gooshaan.
Tikidhka lagu raacayo diyaaradaha u kala gooshaya labada wadan ayaa ku bilaaban doona lacag qaali ah, waxaana tikidhka diyaaradaha lagu raaco Addis Ababa ilaa Asmara uu qiimihiisu uu noqon doono 13,008 lacagta Itoobiya oo u dhiganta $472 oo doolar.
Dhinaca kale Madaxa shaqaalaha xafiiska Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in shacabka Eritrea iyo Itoobiya aanan looga bahnayn inay haystaan fiiso marka ay doonayaan inay u kala safraan labada dal.